एनसेलमा अब आफ्नै धून रेकर्ड गरी पीआरबीटी बनाउन सकिने, अरुले मन पराए पुरस्कार पनि पाइने
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकहरुले अब आफ्नै धुन रेकर्ड गरी आफ्नो प्ले ब्याक रिङ्ग टोन(पिआरबिटी) को रुपमा राख्न र अरुलाई सो धुन प्रयोग गर्न आह्वान गर्न सक्नेछन् । साथै धुन बनाउने ग्राहकले आफ्नो धुनलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरी प्रत्येक हप्ता आकर्षक पुरस्कार जित्न सक्नेछन् । एनसेल प्रा.लि.ले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि...
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकले अब कुनै पनि समय बिनाकुनै झञ्झट एनसेलको आकर्षक डेटा सेवाको मज्जा लिन सक्नेछन् । एनसेल प्रा. लि.ले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ, जसअन्र्तत ग्राहकले अब अझ सुलभ दरमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस सेवाबाट फाइदा लिन सक्ने भएका हुन् । बुधबार(असोज १ गते)देखि लागू हुने गरी आएको यो योजनाअन्तर्गत प्लान...
गुणस्तरीय शिक्षा सम्मेलनमा एनसेलको सहकार्य
काठमाण्डौ । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय गुणस्तरीय शिक्षा सम्मेलन–२०१९को आयोजना गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र रातो बङ्गला फाउण्डेसनसँग सहकार्य गरेको छ । यस सहकार्यअन्तर्गत आयोजना गरिएको तीनदिने सम्मेलन सोमबार समापन भएको छ । ...
एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, ठूला करदाता कार्यालयको लाभकर निर्धारण प्रक्रिया बदर
काठमाण्डौ । दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेलले तत्काल ठूला करदाता कार्यालयबाट निर्धारण भएको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ बराबर लाभकर तत्काल तिर्नु नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभकर निर्धारणको प्रक्रियालाई बदर गरेसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । गत बैशाख पहिलो साता ठूला करदाता...
जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट–अप कोलाबोरेसन वर्कसप’ सम्पन्न
काठमाण्डौ । विश्वभरका मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन जिएसएमए (जिएसएमए एसोसियसन) ले एनसेलसँगको सहकार्यमा नेपाली स्टार्ट–अपहरुका लागि एक दिने ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’को आयोजना गरेको छ । नेपालमा स्टार्ट अप कम्पनीहरु र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरुका बीचमा सहकार्य सुदृढ पार्नु यो कार्यशालाको उद्देश्य रहेको थियो...
काठमाण्डौ । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत धुलिखेल हस्पिटल– काठमाडौ युनिर्भसिटी हस्पिटलसँग टेलिमेडिसिन र हेल्थ इन्फर्मेटिक्स् कार्यक्रम संचालनका लागि सम्झौता गरेको छ । प्रविधि तथा तथ्याङ्कमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विधि अपनाई ग्रामिण, दुरदराजका सेवाबाट बञ्चित समुदायहरुलाई...
एनसेलद्वारा ‘एनसेल फर बिजनेश’ सेवाको सुरुवात
काठमाण्डौ । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले सोल्टी होटलमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच आफ्नो ‘एनसेल फर बिजनेश’ सेवाको शुभारम्भ गरेको छ । उक्त समारोहमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरु, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधीहरु, उद्योगी व्यावसायी, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु र सञ्चार क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थिती रहेको थियो । समारोहमा...
एनसेलद्वारा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई रु. १.३ करोड बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने
काठमाण्डौ । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसमा विभिन्न पाँच संकायमा अध्ययन गरिरहेका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान प्रदान गरेको छ । छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान ललितपुर स्थित होटल...
विदेशबाट एनसेलमा कल आउँदा उपहार पाइने, १० जनाले जिते स्मार्टफोन
काठमाण्डौ । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले ‘कलआयो पैसा पायो’ योजनाका विजेता ग्राहकहरुको घोषणा गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत पहिलो चार हप्ताका १० जना ग्राहकहरुलाई एनसेलले स्मार्टफोन हस्तान्तरण गरेको छ। वैशाख १६ देखि संचालनमा रहेको यो योजना श्रावण १३, २०७६ सम्म संचालनमा रहनेछ । एनसेलले आफ्नो कस्टमर लोयल्टि कार्यक्रमअन्तर्गत संचालनमा...
काठमाण्डौ । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि डेटामा आकर्षक योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ग्राहकले डबल फोरजी डेटाको मज्जा लिन सक्नेछन् । यो योजनाअन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले सात दिन र तीस दिन समयसिमा भएको गज्जबको डेटा प्याकको खरिदमा बोनस स्वरुप फोरजी डेटा भोल्युम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो अफर यही जेठ ३० गते (बिहिबार)...
एनसेलको फोरजी अब देशका १,००० बढी स्थानहरुमा
काठमाण्डौ । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले नविन प्रविधि भित्र्याई त्यसको लाभ ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम देशकै बृहत चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा फोरजी/लङ्ग टर्म इभोलुसन (एलटिई) नेटवर्क थप विस्तार गरी देशका १,००० भन्दा बढी स्थानहरुमा फोरजी सेवा पुर्याएको छ । एनसेलले आइतबार आफ्नो फोरजी सेवा देशका सातै प्रदेशका १,००० भन्दा...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुङ्गेलको सयुक्त इजलासले आगामी जेठ २१ गते विवाद समाधानका गर्न पूर्ण सुनवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने अल्पकालीन आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि एनसेलसँग कर नलिन आदेश जारी गर्दै बैशाख २३ गते छलफलका...
एसइई सकेकालाई एनसेलको पहिलो सिमः रु. १ मै पाइने, साथमा बग्रेल्ती सुविधा
काठमाण्डौ । नेपालको निजी क्षेत्रको टेलिकम संचालक एनसेलले एसइइ दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै पहिलो सिम अफर प्रस्तुत गरेको छ । यो पहिलो सिमको मूल्य केवल १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सिममा दिन र रातको डाटा प्याकहरु, प्रत्येक पटकको रिचार्जमा एसएमएस र डाटा बोनस तथा माइ फाइभ समाविष्ट छन् । विद्यार्थीहरुले सिम आफ्नो नजिकैको...